Amabhishi amahle kakhulu oLwandle Olumnyama eRomania | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Amabhishi, ERomania
Ngabe kwenzeke kuwe ukuthi usebenzise i- iholide lasehlobo eRomania? Leli lizwe eYurophu linogu oluhle oLwandle Olumnyama olugcwele izindawo zokungcebeleka ezinhle, isimo sezulu esifudumele, amamayela namamayela wamabhishi, izivini kanye namadolobha amadala futhi amahle angawavakashela.
Amabhishi amahle kakhulu eRomania yiwo atholakala phakathi Mangalia a UMamaia, kulapho kugxilwe khona amahhotela, okunikezwa yi-gastronomy kanye nesakhiwo sabavakashi kakhulu. Ngikumema ukuthi uzitholele lamabhishi amahle futhi uwakhele amaholide akho.
1 Ugu lwaseRomania oLwandle Olumnyama
2 Mamaia, ethandwa kakhulu
3 I-Eforie Nord
4 I-Eforie Sud
Ugu lwaseRomania oLwandle Olumnyama
Ugu loLwandle Olumnyama Kwaziwa amakhulu eminyaka njengendawo yokwelapha noma yokwelapha izifo zamathambo nesikhumba, i-rheumatism, i-arthritis noma izinkinga zemizwa, isibonelo. Ngakho-ke ngokuhamba kwesikhathi eziningi zalezi zindawo zokungcebeleka sezihlelwe zenziwa ezempilo yezokuvakasha noma okwelapha.
Lokho kusasinda kuze kube namuhla akukho ukushoda kwama-spas Banikela ngamanzi okugeza odaka athathwa ngqo emachibini athile anosawoti asendaweni futhi azuze udumo lomhlaba.
Ngakolunye uhlangothi, abantu abachitha amaholide abo ogwini bangakwazi futhi ngokuvamile bathathe uhambo oluncane baye ngaphakathi ukuze balazi futhi bathole ezinye izimanga: izindlu zezindela ezindala zaseBucovina, eBucharest noma eDanube delta, ngokwesibonelo.
Ngakho, izindawo zokungcebeleka ezaziwa kakhulu zisakazeke ogwini olucishe lube ngamakhilomitha angama-300 futhi phakathi kwabo kukhona uMamaia odumile, uNeptune, uSaturn, uVenus, uJupiter, u-Olympus noma u-Eforie Nord, u-Eforie Sud, uCap Aurora, uCostinesti, uVama Veche, phakathi kwabanye.
Mamaia, ethandwa kakhulu
Kuyindawo yokubhuka enkulu futhi ethandwa kakhulu ogwini lwaseRomania. Singamakhilomitha ayisikhombisa ubude futhi siphakathi kwamamitha ayi-100 kuya kwangu-250 ububanzi. Ngale kwesihlabathi kunamahhotela amahle abheke olwandle.
Isikhathi sasehlobo siqala ekuqaleni kukaMeyi kuya kuSepthemba futhi ngaphandle kwenkathi yeholide akukho muntu. Itholakala phakathi koLwandle Olumnyama neChibi Siutghiol futhi ngalezi zinsuku izinga lokushisa lizungeze ama-30 ºC amnandi.
Yize amahhotela eyizinkanyezi ezine nezinhlanu ungathola indawo eshibhile noma uye ekhempini, kepha kusobala, hhayi indawo eshibhe kunazo zonke.
Kuyindawo yokuphumula, kuthule kakhulu kune UMamaia. Itholakala phakathi koLwandle Olumnyama neLake Techirghiol, amamitha ambalwa ngaphezu kogu lolwandle. Kuyindawo ethandwa kakhulu unyaka wonke futhi ihlose kakhulu ekuvakasheni komndeni ngoba amabhishi alo angamanzi azolile.
"Isibhedlela sokuqala" saqala ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi abantu baqhubeka bezokwelapha ezinye izifo ukuze baphile ezempilo yezokuvakasha. Ungasizakala ngemithi yabo ye-sauna, izindawo zokugeza zodaka, izindlela zokwelapha ezinciphisa ukucindezeleka, nalolo hlobo lwento.
Kungamakhilomitha amahlanu ukusuka e-Eforie Nord namakhilomitha ayi-19 ukusuka eConstanta. Kuyindawo ethandwayo ethandwayo kusukela ngo-1912 kodwa-ke igama lakhe kwakunguCarmen Sylva. Kuthule kakhulu ukuthi udadewabo omdala nemigwaqo yayo emincane yonke igelezela olwandle.
Le spa isendaweni ephakeme kakhulu kunezinye izindawo zokungcebeleka zaseRomania kusukela eweni lapho itholakala khona liphakeme, lingamamitha angama-35. Yize kuthule du, akusho ukuthi ayikho impilo yezivakashi.
Indawo ehamba phambili ngukuthi i-playa Elihle, ubuhle obunemigoqo, izambulela, amatafula nama-lounger ukujabulela usuku. Ekugcineni, ukwelashwa kobuhle ngodaka oluvela eLake Techirghiol nakho kuyanikezwa lapha.
Le ndawo yokubhuka ngasolwandle ingamakhilomitha angama-38 ukusuka eConstanta, onqenqemeni lwehlathi ngakho yindawo eluhlaza kunaleyo yonke enye.
Inamahhotela angamashumi amabili futhi kunezinhlobonhlobo ezinkulu amakhefi, imigoqo, izindawo zokudlela namathala ahlala izivakashi ikakhulukazi. Laba bavakashi bobabili abasha nabadala abanomndeni kusukela lapho kunemidlalo yezamanzi, i-cinema evulekile, imibukiso yaseshashalazini nepaki yokuzijabulisa.
I-spa esondelene kakhulu neNeptune ngakho-ke bakha eyodwa. Uma sikuthatha ngokwehlukana incane kodwa futhi ithandwa kakhulu ehlobo.
Kwakudume nakakhulu ngezikhathi zobukhomanisi futhi kwakubiza kakhulu. Kuphela ngabantu ababemenywe yilowo owayengumongameli wangaleso sikhathi, uCeausescu.
Ibhishi lingamakhilomitha kuphela ubude futhi uhlala ethekwini eligqekezekelwe amatheku namadamu. Uma ufuna i- indawo encane futhi ethule kakhulu lokhu kuhamba phambili njengoba kuyizindawo zokungcebeleka ezincane kunazo zonke eRomania.
Kunezindawo zokudlela ezanele, amakilabhu nemigoqo yokuzijabulisa ngaphandle kokubanga umsindo.
Akuyona indawo eshisa kakhulu ehlobo futhi itholakala phakathi kweJupiter neSaturn. Ngenxa yokutholakala kwayo kuze kube manje empumalanga kunamahora angaba yishumi nambili okukhanya kwelanga ngosuku ngakho kuhle lokho.
Ukuzola kwayo, ukunikezwa kwayo okuhle kwezokuzijabulisa kanye ne-gastronomy nokunikezwa kwezemidlalo yamanzi ne-spa ukuthi ikwenze kwaba yi-spa iheha abantu abakhulu.
Umoya wasolwandle uyaqabuleka ngenkathi yasehlobo bese ufinyelela ibhishi layo elingamakhilomitha amabili ubude elizungezwe amahhotela namahostela. Ibuye ibe nezindlu ezimbili zabavakashi, iDelta neDanube, enezindlu zikanokusho kanye nokuzijabulisa kwazo, futhi sithola nezindawo zokulala ngaphakathi kwamanye amahhotela.
ISaturno yidolobha elihle kakhulu elisogwini, linezimbali eziningi emigwaqeni yalo futhi amanani afinyeleleka kalula ukwedlula omakhelwane bawo.
Kungamakhilomitha angama-45 ukusuka eConstanta futhi ibhishi layo lihlotshiswe eweni eliphakeme. Akusilo idolobha, ngumuzi idume ngezikhungo zayo zezempilo abangongoti uma kukhulunywa ngokwelapha izifo nokuphazamiseka kwesikhumba nomzimba.
Inokuheha okungokomlando njengoba imi endaweni efanayo lapho kwakhiwa khona iCallatis Fortress yekhulu lesi-XNUMX (namuhla inendawo yokudlela ephansi okunconywa kakhulu), abaningi imisebenzi yamasiko, wezincwadi, wokulingisa, nasehlobo amahora amaningi elanga.
Akuyona indawo eshisa kakhulu, bala lokho ehlobo alikho ngaphezu kuka-25ºCNgakho-ke uma ungawathandi amagagasi okushisa, le indawo enhle. Eqinisweni, wonke amabhishi oLwandle Olumnyama eRomania anjalo, anelanga eliningi kodwa angashisi nhlobo.
Uma uyi-hippie kancane noma ufuna okuthile kukhululeke kakhudlwana lokhu kuyindawo engcono kunazo zonke ngoba khomba abantu abasha. Kungamakhilomitha angama-31 ukusuka eConstanta futhi Ibhishi lalo lingamamitha ayi-800 ubude, yize incane impela ngoba ububanzi bayo buphakathi kwamamitha ayi-10 no-15.
Imvamisa kuba nabafundi abaningi, amanani aphansi, kunamahhotela amaningi amancane, izindlu eziqashisayo zabavakashi kanye namakamu. Inechibi elincane, elinosawoti kakhulu nodaka elisetshenziselwa ukwelapha i-rheumatism.
Njengoba ukwazi ukubona kunezindawo eziningi zasehlobo ogwini loLwandle Olumnyama eRomania, eyodwa yazo zonke izinhlobonhlobo nakuzo zonke izivakashi: ukunethezeka, ukuthula, amahippie, imindeni enezingane nalabo abaneminyaka engaphezu kwengama-60 ubudala.
Lesi yisampula samabhishi asaziwa kakhulu kepha akubona bodwa. Amanye amabhishi yiCorbu, iVadu, amanye amabhishi angacekiwe, i-Mai ethulile, iVama Veche, iCap Aurora nohlu luyaqhubeka. Kufanele ukhethe indawo oya kuyo, kepha njengoba ubona IRomania inokunikezwa okukhulu kakhulu ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amabhishi » Amabhishi amahle kakhulu oLwandle Olumnyama eRomania